All na ị chọrọ ịmata banyere Spotify adịchaghị
.Spotify Efu c
Spotify bụ a na-ege ntị ọrụ na maka desktọọpụ kọmputa, nakwa dị ka mobile ngwaọrụ dị ka cell-igwe ma ọ bụ mbadamba The ọrụ dị na ọtụtụ mba gafee Europe nakwa dị ka United States. Ọ bụ ezie na o nwere free version, Spotify nwekwara adịchaghị version nke awade ọtụtụ ihe ndị ọzọ nhọrọ (dị ka na-eji Spotify on 3 ngwaọrụ) nakwa dị ka atọpụ ndị mkpọsa ngwá ahịa nke nwere ike ịbụ, na-ahapụ-eme ihe n'eziokwu, ezi-akụda mmụọ. Otú ọ dị ahapụ na-amalite na ihe ndị bụ isi.
Nkebi nke 1: obodo gị na-adịghị akwado site na Spotify? Abụghị nsogbu!
Part 2: Spotify adịchaghị ego mmeghe, ọ bụ kwesịrị ya?
Part 3: Spotify Free Vs Unlimited Vs adịchaghị
Part 4: ebe m ga-Spotify adịchaghị ego maka free ma ọ bụ ego
Part 5: Olee otú iji Debanye aha ma ọ bụ kagbuo Spotify adịchaghị
Part 6: Download Spotify music enweghị adịchaghị
Part 7: TunesGo - download Spotify - eme ka Spotify dị ka onwe gị music isi iyi
Part 1: gị mba akwadoghi Spotify? Abụghị nsogbu!
Spotify akwado ọtụtụ mba nke ụwa na ọrụ ndị bi ná mba ndị ahụ nwere ike ịmepụta a Spotify akaụntụ na-enweghị ihe ọ bụla okwu. Otú ọ dị ọrụ ndị na-adịghị ndabara ọma bi ná mba dị ka ndị a doro anya na-enweghị ngwọta ziri ezi? Ezighị ezi, na onye ọ bụla nwere ike ịmepụta a Spotify akaụntụ, dị ka ogologo oge ọ / ọ nwere ihe njikọ Ịntanetị. Nsogbu bụ na Spotify ghotara mba unu ji IP Address nke obodo gị, gwụ gị site na-eke ihe akaụntụ na gị onwe gị. Ma nke ahụ bụ ihe na-ike ngwa ngwa ofu.
Nzọụkwụ 1: Gaa Vpngate.net, pịa Download na ibudata SoftEther Okwey Client + Okwey Ọnụ Ụzọ Ámá Client Ikwunye-na. Wepụ software na wụnye ya na iji exe faịlụ.
Nzọụkwụ 2: Gbaa ndị omume na ị ga-nke a:
Pịa na Okwey Ọnụ Ụzọ Ámá Public Okwey Relay Servers, ma chọọ mba nke ị na-ụfọdụ na a na-akwado site na Spotify (US ma ọ bụ UK atụ)
Pịa na mba nke adreesị IP na ị chọrọ iji nweta, mgbe ahụ, pịa Jikọọ na Okwey Server na ị na-eme. Adreesị IP gị a gbanwee ma ị nwere ike ugbu a ike gị nnọọ onwe Spotify akaụntụ, ma site na iji gị ozi ma ọ bụ Facebook akaụntụ. Iji Okwey ọnụ ụzọ ámá bụ naanị na a chọrọ mgbe na-eke gị onwe gị na akaụntụ, ma ya bụghị a ọjọọ echiche na ị, site n'oge ruo n'oge, abanye na-eji Okwey n'ọnụ ụzọ ámá.
Nkebi nke 2: Spotify adịchaghị ego mmeghe, ọ bụ kwesịrị ya?
Dabere n'oge ị na-agụ nke a, price nke Spotify si kwa ọnwa ndenye aha ego nwere ike ịdị iche iche, n'ebe a na oge ọ bụ na gburugburu 9,99 US dollar ma ọ bụ British pound. Ikpe ikpe Spotify si kwa ọnwa na ndenye aha bụ na-enweghị ekele ọrụ ebe ọ bụ na dị iche iche na-onye kwa ọnwa mmefu ego nakwa dị ka ya needs.As ị maara, Spotify awade 3 ụdị nke ya ọrụ: Free, Unlimited na adịchaghị, ya mere na iji zuru zaa ajụjụ si n'elu anyị ga-mkpa nwere a ọzọ zuru ezu anya n'ime atụmatụ nke ọ bụla otu otu n'ime ndị free na akwụ ụgwọ ụdị.
Nkebi nke 3: Spotify Free Vs Unlimited Vs adịchaghị
Iji gosi ihe ọ bụla set-enye, e nweghị ndị ọzọ ụzọ karịa ka a ginormous chaatị ka unu wee na-enwe ihe kpọmkwem echiche ihe ị na-na-maka ego gị.
All music dị
Ọ dịghị playback na-agaghị emeli
Na-akpọ gị onwe gị Mp3 na ina
Spotify Social atụmatụ
Spotify nnweta ná mba ọzọ 14 ụbọchị 14 ụbọchị 14 ụbọchị
Na-ege ntị na-enweghị interruptions
Play Mode Ịkpọgharịa naanị
(6 track skips kwa awa)
-Anọghị n'ịntanetị mode
Sound Ogo nkwalite
Play Spotify site ngwaike ngwaọrụ na Spotify Jikọọ
Anyị pụrụ ịhụ na Unlimited version adịghị enye ọ bụla ohere mgbe ọ na-abịa n'aka mkpọrọgwụ ngwaọrụ, ya mere subscribing Unlimited,-eme ka uche naanị ma ọ bụrụ na i jiri kọmputa nke desktọọpụ.
Ọzọkwa offline mode bụkwa maka nke a set nke ọrụ, ya mere Unlimited bụghị mgbe nile ihe na-azọrọ na ha na-adị. Ya mere, na n'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-eji cell-igwe na mbadamba nnọọ ugboro ugboro maka ụtọ music adịchaghị otú ukwuu-eme ka uche, ma na-ewere na Unlimited-akwụ ụgwọ naanị 4.99 (euro, US dollar, ma ọ bụ pound) n'ihi na ndị mmadụ na-eji ukwuu n'ime a desktọọpụ ma ọ bụ a laptọọpụ ọ bụ a ezi uche ngwọta.
Nkebi nke 4: ebe m ga-Spotify adịchaghị ego maka free ma ọ bụ ego
Spotify awade a kwa ọnwa adịchaghị ikpe otú nke a bụ ezi ụzọ maka onye ọ bụla ịnwale n'ezie ọrụ tupu enye ego ọ bụla. Ozugbo i kere gị Spotify akaụntụ e nwere ụzọ iji nweta ihe a serice na mbụ na ụzọ kasị mma bụ na-amalite a Free adịchaghị Ikpe.
Free adịchaghị Trial
Iji nweta a Free ikpe ị ga-mkpa ime na-esonụ:
Nzọụkwụ 1: Gaa Spotify.com, na pịa na akaụntụ gị, na mgbe ahụ gaa na ndenye aha. E ị ga-ahụ na n'elu aka nri akuku Gbalịa adịchaghị N'ihi free, ị ga-mkpa iji gị kaadị ma ọ bụ na ị PayPal Akaụntụ. Mara na ị ga-enwe ike iji Free adịchaghị ikpe, n'oge ọ bụla n'ọdịnihu.
Nzọụkwụ 2: mbụ, ị ga-mkpa họrọ gị ugwo usoro
Dee gị Paypal paswọọdụ iji abanye na.
Pịa na Kwere na Gaa n'ihu bọtịnụ mechaa gị subscrption.
Cheta na: Jide n'aka na-nwere ndị 9,99 na gị PayPal Akaụntụ ma iwu a Free ikpe ga-agaghị ekwe omume. Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji kwụọ ndenye aha mgbe ikpe na-agwụ ịhụ "Olee otú iji Debanye aha ma ọ bụ kagbuo Spotify adịchaghị?" Si n'okpuru.
Nwere bụ onye ọzọ ụzọ na-adịchaghị for free ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ a ego price.
Spotify adịchaghị Koodu
Iji chọta ha na ị ga mkpa iji dị iche iche search engines (dị ka Google) iji chọta saịtị ebe dị otú ahụ koodu giveaways dị. Ndị a Koodu nwere ike inye gị a free nzọ ụkwụ ma ọ bụ a ego na ndenye aha price.
Ozugbo yoou nweta gị koodu mgbasa ozi, na-aga gị Spotify Akaụntụ, pịa gbapụta taabụ ma tinye koodu ị natara.
Part 5: Olee otú Debanye aha ma ọ bụ kagbuo Spotify adịchaghị
Usoro maka subscribing forSpotify adịchaghị bụ kpọmkwem otu gị dị ka onye iro na-enweta Spotify Free adịchaghị Trial, otú ị pụrụ iji ego ndị nkuzi site n'elu. Ya mere ke ibuot emi anyị ga-elekwasị anya na ịkagbu gị Spotify adịchaghị na ndenye aha.
Cheta na: Dị ka Spotify Free adịchaghị ikpe, jide n'aka na ha nwere ego chọrọ maka kwa ọnwa ndebanye aha, ma ị ga-enwe ike mechaa gị iji.
Nzọụkwụ 1: Mgbe ị na-ekpebi kagbuo gị Spotify adịchaghị ndenye aha ị ga-nee abanye n'ime gị Paypal akaụntụ ọzọ, Pịa na m Profile My Ego, mgbe ahụ gaa My tupu mma ịkwụ ụgwọ wee pịa on Update.
Nzọụkwụ 2: Ọ bụrụ na ị nwere Amy-eji mma ego na akụkọ gị, na-aga iyo Ọnọdụ site na ịtọ Actrive na pịa Go.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo ị na-ahụ Spotify tupu mma ugwo, pịa Kagbuo na ị na-eme. Iji na-n'aka ego otu onye ọzọ oge gị tupu mma ịkwụ ụgwọ.
Nkebi nke 6: Download Spotify music enweghị adịchaghị
Ọ bụrụ na ị na-ahụ ụfọdụ song na-amasị gị na i nwere ike wanna na-ọ bụrụ na ị mgbe ụfọdụ gaa offline ma ọ bụ ị ma eleghị anya na-achọ ime a ringtone nke ya Wondershare Streaming Audio Recorder nwere ike ịbụ ezigbo ngwá ọrụ iji n'ihi na kpọmkwem oge.
Ozugbo pịa red ndekọ button, Wondershare ga-amalite Ndekọ oge ụda dị.
Mgbe ị gụsịa Ndekọ Wondershare gụgharia Audio edekọ ga n'egbughị oge ID abụ na ị dị nnọọ enwetara azọpụta gị enweghị isi hassle.
Mgbe na ị bụ free dezie ya, zọpụta ya dị ka gị Ringtone na bulite ya na gị na iTunes Library enbling ị mekọrịta gị ụdaolu na niile nke gị Apple ngwaọrụ.
Nkebi nke 7: TunesGo - download Spotify - eme ka Spotify dị ka onwe gị music isi iyi
> Resource> Download> All Gị Mkpa Maara Banyere Spotify adịchaghị